Izindlela ezi-4 zokwengeza ukuzethemba | Bezzia
UToñy Torres | | Inhlalakahle
Ukuzithanda kufanele ngaso sonke isikhathi kube uthando lokuqala lomuntu. Ukuzithanda kubalulekile, kuyisihluthulelo sokukwazi ukunikela ngakho konke okuhle kuwe nakwabanye. Akunasimo lapho ukuzethemba kungathathwa njengokungekuhle, ngoba akukho lutho olungalungile ekuziqhakambiseni wena, ukwazi ukuthi ungakwazisa kanjani konke okuhle okukuwe nokuzithanda ukuze uthande abanye.
Kodwa-ke, ukuzethemba akuyona into engokwemvelo, kuyimfanelo okufanele kusetshenzelwe kuyo impilo yonke. Ngoba nganoma yisiphi isikhathi kungenzeka isimo esinyakazisa izisekelo zobudlelwano obuqinile bomuntu ngamunye. Uthando lwakho lungabuye luphuke, lonakaliswe, Kungakwenza ungabaze, ungathembi futhi kukwenze ucabange ukuthi awubalulekanga ngokwanele.
1 Ungakhuphula kanjani ukuzethemba
1.1 Prakthiza ukubonga
1.2 Nakekela isithombe sakho
1.3 Lwela lokho okudingayo ukuze wandise ukuzithanda
1.4 Funda ukuthi cha
Ungakhuphula kanjani ukuzethemba
Kunezindlela zokwanda ukuzithanda, amathuluzi alula ongawasebenzisa ukuthuthukisa umuzwa wakho kuwe. Ngoba kungumuzwa wokuthi imibandela indlela yakho yokuxhumana nabanye abantu. Ngaphezu kwalokho, ukuzethemba kwakho noma ukuzethemba kwakho kubalulekile uma kukhulunywa ngokuzibonakalisa emsebenzini, kanye nokubhekana nezimo ezingezinhle ezivela empilweni.
Ukusebenza kuwe ukwandisa ukuzethemba kuzokusiza ukuthi uphile kangcono, ngoba isikhathi esiningi osinikezela ekukhuleni kwakho komuntu siqu nangokomzwelo, kulapho uzazisa kakhulu izinto ozenzayo futhi nokuzethemba kwakho kuyaqina. Lokho wukuthi, kuba yindilinga lokho usebenza usuku nosuku, futhi kancane kancane uyazithanda ngokwengeziwe nangcono. Ngoba ukuzethemba akusho ukuzicabangela wena wedwa, kepha kusho uthando kulo lonke igama elibanzi. Lezi zindlela zizokusiza ukuthi wandise ukuzethemba kwakho.
Uma ungazibongi izinto osunazo, awusoze wajabula ngokugcwele ngezinye izinto eziningi ozizuzayo. Ngoba akukho lutho oluyoze lwanele ngakho-ke kuyohlale kunomuzwa wokungeneliseki. Impela empilweni yakho kunezinto eziningi okufanele ubonge ngazo, izinto ozizuzile ngomzamo wakho. Uphahla ongahlala kulo, ukudla okuhlukahlukene efrijini, ubudlelwano bomuntu siqu, ngisho nezinto ezibonakalayo.
Njalo ebusuku cabanga ngento oyifezile ngalolo suku, njengokuqeda umsebenzi, ukuba mnandi kwabanye abantu, noma ukuzivocavoca umzimba. Noma yini oyiphakamisile futhi ngomzamo ukwenzile. Zibonge futhi uzokwazi ukwazisa umzamo wakho ngamunye, ngaleyo ndlela wandise umuzwa oqondile ozitholela wona.
Nakekela isithombe sakho
Impilo yomzimba nempilo yengqondo ziyahambisana, enye ayikwazi ukuba khona ngaphandle komunye. Lokhu kusho ukuthi kufanele unakekele impilo yakho, ngokudla, ukuzivocavoca umzimba nemikhuba enempilo, kepha kufanele futhi unakekele impilo yakho yengqondo ngokuhlakulela ingqondo yakho, ufunda izincwadi, ulalele umculo, unakekele isithombe sakho sangaphandle okuyiso esibingelela wena nsuku zonke esibukweni. Ukuzinakekela nakho kuzithanda wena futhi lapho ukwenza ngokwengeziwe, imizwa yakho iba mihle ngokwengeziwe kuwe.
Lwela lokho okudingayo ukuze wandise ukuzithanda
Abantu bangabantu ngokwenhlalo ngokwemvelo, sidinga ukuhlanganyela isikhathi nempilo nabanye abantu, yingakho sifuna umlingani esizoguga naye. Kule ndlela, uvame ukukhohlwa okudingayo wena ukuhlangabezana nezidingo zomunye umuntu. Lokhu kuba ubuhlobo obubi, ngoba kwesinye isikhathi umuzwa wecala ungavela, athathe isikhathi sakho kuwe nakuwe ngokunganikeli isikhathi osidingayo.
Funda ukuthi cha
Umuntu ozazisayo uyakwazi ukuthi cha ezintweni noma ezimweni angazithandi. Ukucabanga ngawe, okufunayo, okuthandayo nokuthi ufuna ukusebenzisa isikhathi sakho nezinsizakusebenza kuqinisa kanjani ubudlelwane bakho. Uma udinga ukubeka izidingo zakho phambili, yiba nesibindi sokuthi cha, ngoba lokho akukwenzi umuntu ozithandayo, kodwa umuntu ozithandayo.
Impilo kufanele iphile, ithokozelwe ngokubambisana nabantu abafaka isandla kuwe. Kepha ukuba nobudlelwano obuhle nabanye abantu, kubalulekile ukuba nobudlelwano obuhle nawenoma. Sebenzela kulobo budlelwane njengoba nje ubunganelisa abanye abantu.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ezempilo » Inhlalakahle » Izindlela ezi-4 zokwandisa ukuzethemba